तपाईंलाई कोरोना सर्ने जोखिम कति छ ? यसरी थाहा पाउनुस् । यसको प्रयोग कसरी गर्ने? – Sandesh Munch
तपाईंलाई कोरोना सर्ने जोखिम कति छ ? यसरी थाहा पाउनुस् । यसको प्रयोग कसरी गर्ने?
कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) को व्यक्तिगत तथा स्थानीय जोखिम मूल्यांकन गर्न सकिने विधि (कोभिरा) सार्वजनिक गरिएको छ। विभिन्न विषय विज्ञको सहभागितामा साइन्स हब नेपालले निर्माण गरेको यो विधि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आइतबार एक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
बेलायतको ब्रिस्टोल युनिभर्सिटिमा कार्यरत डा. ऋषिराम पराजुलीले यसको आधार कसरी तयार गरिएको छ भन्नेबारे प्रस्तुति दिएका थिए। यस विधिले कोभिड संक्रमण भएमा पनि उमेर, लिंग, दीर्घरोगको अवस्थाले आफ्नो जोखिम कति छ, साथै आफ्नो अन्य विविध दैनिक कार्यका आधारमा आफूलाई कोरोना सर्न सक्ने जोखिम कति छ भन्नेबारे आकलन गर्नेछ।
साइन्स हबका अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डा। भोजराज घिमिरेले यसमा प्रयोग भएको प्रविधि, ‘डाटा’ को गोपनीयता तथा सुरक्षालगायत निकट भविष्यमा हुने परिमार्जनसम्बन्धी विषयमा जानकारी दिएका थिए। साइन्स हबले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने, स्थानीय तहका विविध तथ्यांक समुदायस्तरबाटै समेत लिन सकिने तथा बहुभाषामा यो ‘एप्लिकेसन’ निर्माण गर्ने जनाइएको छ।
कोभिरा के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने?
व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन विधि चीन, इटाली, जर्मनी, स्पेन, बेलायत तथा अमेरिकाका मृत्यु भएका करिब ६० हजार व्यक्तिको तथ्याङ्कलाई केलाएर बनाइएको हो । व्यक्तिगत जोखिम व्यक्तिको उमेर तथा दीर्घ रोगमा आधारित छ भने सर्नसक्ने जोखिम, स्थानीयस्तरमा कोरोना सर्ने जोखिम तथा व्यक्तिको आफ्ना क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । यसले जोखिमलाई पाँच तहमा देखाउँछ, अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च। बीचमा रहेको सुईले जुन भागमा देखाउँछ, त्यो नै जोखिमको स्तर हुनेछ। कुन अवस्थामा के गर्ने भन्ने सुझाव पनि यसले देखाउनेछ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले वेवनारमार्फत सो ‘एप्लिकेसन’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
Prevसंसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले ट्राफिक नियम तीन पटकभन्दा धेरै उल्लंघन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
Nextकोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न ‘गुर्जो’को रस फाइदाजनक : योगगुरु रामदेव
इन्डोनेसियामा बाढी,१६ को मृत्यु २३ बेपत्ता
सर्लाहीमा ‘प्रेस’ लेखिएको मोटरसाइकलबाट हतियार बरामद